Cumar C/rashiid oo R/Wasaaraha dalka Somalia noqonaya - iftineducation.com
Cumar C/rashiid oo R/Wasaaraha dalka Somalia noqonaya
iftineducation.com – Sida ay heshay iftineducation.com xog ku saabsan magacaabista Ra´iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegeysa in Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo hada ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka, in la magacaabi doona 24 saac ee soo socda.
Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh ayaa ogolaaday soo jeedinta tallooyin ku saabsan in Cumar C/rashiid uu u magacaabo Ra´iisul Wasaaraha dalka,oo horay xilkan ugu soo qabtay Dowladdii Sheekh Shariif.
Tallooyinkan oo ka yimid beesha caalamka iyo xubno ku dhow Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu danbeyntii la sheegay inuu aqbalay magacaabista Cumar C/rashiid.
omar-abdirashidMaxay ka dhiggan tahay magacaabista Cumar Cabdirashiid?
Haddii si rasmi ah loogu dhowaaqo, magacaabista Cumar Cabdirashiid waxa ay ka dhigan tahay afduub lagu sameeyey mustaqbalka Soomaaliya iyada oo laga hormarinayo danta koox gaar ah.
Cumar Cabdirashiid, waxa uu baal mugdi ah ka galay taariikhda Soomaaliya kadib markii uu qeyb ka mid ah badda Soomaaliya u saxiixay Kenya, xiligii uu ahaa Ra´iisul Wasaarihii Dowladdii KMG, isaga oo dhaafsanaya dhowr milyan oo dollar.
Haddii shaqsi ceynkaas ah maanta lagu abaal-marinayo Ra’iisul Wasaare, Maxaa rajo ah oo ay Soomaaliya leedahay? jawaabta adiga is weydii.
Heestadan darteed ayaa loo furay fanaanadan -Muuqaal
Kenya: Aabo Soomaaliyeed oo lagu hor kufsaday gabdhahiisa